Muqdisho: Maxkamadda Ciidamada oo toogasho ku fuliysay saddex askari – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
ku fulisay 3 askari oo ka tirsana ciidamada oo lagu eedeeyey gacan ku dhiiglayaal ahaayeen.
Dilka toogashada ah ayaa ka dhacay fagaaraha Iskool Bolisiiyo ee magaalada Muqdisho, waxaana laba ka mid ah ay ka tirsanaayeen ciidanka xooga dalka Soomaaliya, halka midka 3-aad uu ka tirsanaa ciidanka ilaalada deegaanka ee loo yaqaano Minashibiyo.
Sadexdan Nin ee saaka la toogtay ayaa la sheegay iney ahaayeen gacan ku dhiiglayaal geystay dilal kala duwan, waxeyna maxkamada ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii lagu helay dembiga lagu soo eedeeyay.
Col. Liibaan Yarow oo ah gudoomiayah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sheegay in maxkamadda ciidamadu dilka toogashada ah ku fulisay 3-daas nine e horay uga tirsanaa ciidamada lagu helay dilal ay geysteen.